अर्चना थापाको वालबाटं
श्रीमान् + श्रीमान्= गीता ढकालको दुई चोटि हत्या ।
न्यायको अवसान भएको देशमा...पत्नीको हत्यारा त मिडियाकर्मीहरूलाई हात हल्लाउँदै गाडीमा बसेर गएको देख्दा ठूलै काम गरेजस्तो पो देखिन्छ त ! हाउभाउ हेर्दा जेल बसेको जस्तो लाग्दैन ।
न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्ति कति उचित भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । जुनसुकै राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त भएको न्यायाधीश निष्पक्ष न्यायप्रति समर्पित हुन्छ वा दलप्रति आभारी ? यो एउटा–दुइटा केसको कुरा होइन । राजनीतिक नियुक्तिले लोकतान्त्रिक न्यायिक प्रणालीलाई कति असर गर्छ ? वा गर्दैन ?
दलको कोटामा नियुक्त गरिने न्यायाधीश, आयुक्त, अख्तियार, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका डिन, लोकसेवाजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउनेहरूको स्वार्थ नेतासित जोडिएको हुन्छ । यस्ता नियुक्तिको विरोध गरौँ । विवेक भएका मान्छे पदका लागि नेताको चापलुसी गर्दैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशहरूको चित्त कानुनले होइन, सुनले प्रभावित गरेको होला ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई लाग्यो होला– ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ शास्त्रले नै भनेको छ । रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमतीको पो हत्या गरेको हो । लोग्नेले त्यति हक त पाउनुपर्छ । पैसाको खेल हो कि पहुँचको खेल हो ?
नेपालमा महिलाका मुद्दालाई महŒवपूर्ण ठानिँदैन । गीताका हत्यारा छुटे, दुईचार दिनअघि एक युवतीमाथि एसिड खनाइयो, निर्मलाका हत्यारा समातिएनन् । महिला अयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति छैन । महिलामाथि हुने हिंसाभन्दा महिलाको ‘ढाड’का मुद्दा र फरक तीजका गीतमा राष्ट्रवादीहरू बढी चिन्ता र बहस गर्छन् ।
नयाँ गाडी चढ्ने रहर र नयाँ किन्ने लहड चलेको बेला पुराना थन्केका गाडीका टायरलाई माला बनाएर घप्लक्कै लगाइदिने चलन सुरु गर्नुप¥यो । स्वागत पनि गरिने र पुराना टायरको पनि सदुपयोग हुने !